Halatra taova eto Madagasikara Mbola misy hatrany ireo tsimatimanota
Omaly zoma 23 novambra no nampahafantatra tetsy amin’ny Hotely Telozoro Andrefan’Ambohijanahary ny fitoriana ny zandary Sefo Rejabo,
Sefo Dimby ary Sefo Solofo avy ao amin’ny Borigady Tsiroanomandidy ny fokonolona any an-toerana. Raha tsiahivina dia nisy ny fisamborana an’i Soja Safirisoa izay mipetraka tao Ambohimiarina Ankerana Avaratra ao amin’ny kaominina Tsiroanomandidy ihany tamin’ny 13 oktobra lasa teo. Nosamborin’ireo zandary voalaza anarana tetsy ambony ity farany rehefa niomana hijery baolina tao an-tranony tamin’ny 1 ora teo ho eo. Nolazaina fa hatao famotorana any amin’ny Brigady ka rehefa hanatitra sakafo ny vadiny dia nambara fa mbola lasa nitsangantsangana izy. Ny 15 oktobra dia tonga indray ny fianakaviana hanatitra hanina kanefa nilaza indray ny ao amin’ny Brigade fa nalain’ny miaramila any Belobaka i Soja. Akory anefa ny hatairan’ny fianakaviana satria nolazaina fa maty ny zanak’izy ireo ary any Ambaravaranala ny fatiny. Rehefa nojerena ny razana dia tsy tao intsony ny atidohany, ny masony an-kavanana ary ny ilan’ny taolan-tanany an-kavanana. Nanambara ny fianakaviana sy ny fokonolona fa tsy mpangalatra i Soja fa novonoina hanaovana halatra taova fotsiny. Noho izany dia miantso ny manampahefana isan’ambaratonga izy ireo hampanao famatorana hentitra manoloana ity raharaha famonoana sy fangalarana taovan’olona ity.